iTunes Store nwere ọtụtụ ngwa ọdịnala na ka ị na-ewere àgwà photos ma dezie ha mfe na gị iPad. Ndị a ngwa ọdịnala nwere ike ịgbanwe nkịtị foto na ebube na weird ụzọ. Ọtụtụ ndị ngwa na-eduzi kwupụta iPhone, na ìhè nke eziokwu na i na-ese foto na Njikwa ha ngwa ngwa ma ndị ọzọ na-haziri maka kwupụta iPads nke nwere a ibu ihuenyo. M chọrọ warara ala ndị kasị mma iPad igwefoto ngwa na ga-ekwe ka ị ịgbanwe foto gị ụzọ dị iche iche. Ebe a, m depụta si 5 ngwa na ga-enyere gị ịrụ ịtụnanya ọrụ na naanị a dị ike laptọọpụ ma ọ bụ a na desktọọpụ nwere ike ịrụ. Na-agụ na ị ga-ahụ ngwa ọdịnala nke ndị kacha mma na snapping na-edezi foto gị.
Part 1. Top 5 igwefoto maka iPad ngwa
Part 2. Olee otú iji Wuru na-igwefoto na iPad na Nchọpụta nsogbu
The table n'okpuru na-agwa gị n'elu 5 igwefoto ngwa ọdịnala n'ihi iPhone. Biko nwere anya.
Akwado ekwentị OS
Snap Mkpụrụ 27.9MB 4.5 / 5 iOS 5, 6
Adobe Photoshop Touch 46MB 4/5 Android 3.1 na iOS
SnapSeed ngwa bụ otu nke kasị mma na ahịa na kasị elu fim. Ọ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ mma na simplified na nanị customizing nhọrọ. Iji mee ka ukpụhọde, ị nanị swipe mkpịsị aka gị na ala n'elu, mgbe ahụ, swipe ọzọ si na ekpe gaa n'aka nri slide foto gafee, n'ihi ya ịgbanwe ya osisi ike. Ọ ga-enye gị pụtara ihe oyiyi na ị gaghị esi n'ebe ọ bụla. N'agbanyeghị eziokwu na ọ na-enye ezi oyiyi, ọ kọrọ ụfọdụ foto-edezi atụmatụ.
Ndị ọzọ dị mkpa atụmatụ na-agụnye:
a. Nnukwu edezi. Ọ na-agụnye cropping, edezi na iche ihe oyiyi ahụ, nke ga-agbanwe foto gị kpamkpam.
B. Google+ Instagram mwekota. A ngwa ga-enyere gị aka mfe ịkọrọ gị photos ndị enyi na ezinụlọ site Instagram.
Mụta ihe banyere Snapseed >> (https://itunes.apple.com/EN/app/snapseed/id439438619?mt=8)
Ọ bụ ọhụrụ na ngwa na-Adobe ulo oru mgbe adobe foto ahịa. Ọ bịawo na ọtụtụ desktọọpụ igwefoto atụmatụ na ga-mma foto gị. Ọ na-akwado atụmatụ, dị ka autocorrect, nhọrọ ukpụhọde, tilt nnofega, center-elekwasị anya, retrolux, akụ image, ogologo na bugharia, mmepụta oyiri stampụ, n'ígwé, wand ajị, ederede, dị iche iche nzacha na gradients. Adobe mere ngwa ọzọ na-akpali site tụnyere Photoshop Touch na Facebook, okike ígwé ojii na Google image search.
Mụta ihe banyere Adobe Photoshop Touch >> (https://itunes.apple.com/EN/app/adobe-photoshop-touch/id495716481?mt=8)
Ọ na-enye a pụrụ iche foto edezi ahụmahụ. Ọ na-ejikari site ọkachamara foto n'ihi na ọ pụrụ inye àgwà mobile edezi ọrụ mfe. Ọ na-akwado ẹbọ mmetụta nke bụ obere na ndị ọzọ ngwa ọdịnala na-enyekwa ndị ọzọ ọrụ ndị dị ka; foto mgbanwe (iche, akụkụ ahụ na agba itule), nhazi usoro, clip nkà adianade do, red anya mgbazi, n'ígwé na film ụdị. Ọ na-eri $3.99 otú ọnụ site ọtụtụ.
Mụta ihe banyere Photoforge 2 >> (https://itunes.apple.com/us/app/photoforge2/id435789422?mt=8&ign-mpt=uo%3D4)
Ọ bụ a nkịtị ngwa n'etiti foto. Ọ nwere ọtụtụ na-akpali akpali atụmatụ na-enyere gị aka resize, ụda na ịgbanwe foto. Ọ bụ dịtụ ọnụ ala banyere $2.89 na mfe iji. Ya uru bụ na ọ nwere ọtụtụ mgbanwe, mmetụta, edezi nhọrọ, presets, mbupụ nhọrọ dị ka FTP, nzacha na na-adị mfe ịkọrọ photos na enyi. Nanị demerit bụ na ọ dịghị nwere n'ígwé n'ihi na ọ na-anaghị akwado.
Mụta ihe banyere Photogene >> (https://itunes.apple.com/us/app/photogene-4/id363448251?mt=8)
iMovie bụ ihe na ngwa na-ga-enyere gị na-ewe HD video na edits ha gị afọ ojuju. Ọ na-enye a doro anya interface ndị mara mma na nnukwu thumbnails. N'etiti ndị niile ngwa, nke a bụ otu bụ mfe na ike ga-eji mfe na onye ọ bụla. Ọzọ na-agụnye
Pịa ugboro abụọ a mgbanwe ịgbanwe oge.
Kwado bugharia ma ọ bụ na akuku Obere vidiyo.
Ụdị ihe site ụbọchị.
Ekiri HD fim site na ya.
Ekekọrịta obere vidiyo na ndị enyi gị.
Mụta ihe banyere iMove >> (https://itunes.apple.com/en/app/imovie/id377298193?mt=8)
Ọzọ iPad Igwefoto ngwa ọdịnala n'ihi Ị
1.Camera maka iPad
Ọ na-bụghị dị na iPad, ma ọ nwere ike inyere gị aka ma ọ bụrụ na ị na-eche na ị gaghị adị ndụ n'enweghị ihe na-wuru igwefoto na iPad. The ngwa na ọtụtụ-eji na ike ga-eji na ma iPad na iPhone. Mgbe ị na wụnye a ngwa, gị iPad nwere ike mfe ịchọta na jikọọ na ihe iPhone site Bluetooth. A ga-enyere gị aka ịhụ ihe nile iPhone igwefoto na-ahụ ma na-echekwa ihe oyiyi na iPhone igwefoto emewo.
Ọ bụ mma igwefoto m mgbe eji. Ọ dị mfe ma dị mfe iji. Etinye gị iPad na gị họọrọ ebe na-eji ihe nchọgharị weebụ na ị arụnyere na kọmputa gị aka ịchịkwa igwefoto.
Ọtụtụ ndị dị ka nke a na-eji ngwa n'ihi na nke ezi atụmatụ dị ka: stabilizer, 5 * mbugharị, ngụ oge, okporo itinye n'ọnọdụ na ndị ọzọ na-edezi atụmatụ.
4.Fastest igwefoto pro
Ọ na-ewe a foto na oge ị na-emeghe gị ngwa, na ihe mere na ọ na-akpọ ndị kasị igwefoto. Ọ dị mkpa na ọnọdụ ebe ọsọ na chọrọ na-ewere photos.
Ọ otu nke kasị mma igwefoto ngwa na ahịa nnọọ ji foto ndị chọrọ àgwà photos. Ọ na-enye dịgasị iche iche nke atụmatụ dị ka ịkụ ogbugba, onwe-ngụ oge, antishake, geotagging na ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 1. On n'ụlọ gị gị na ihuenyo, enweta ubé igwefoto na akara ngosi imeghe ya. Họrọ ka igwefoto na video / igwefoto mmịfe kama video
Nzọụkwụ 2. Ebumnuche na mbugharị site na ịme ọpịpị na-adọkpụpụta mmịfe na ala. Metụ onyinyo nke ihe ozugbo n'ihi na ị na-elekwasị anya ya. Ị nwere ike ugbu pịa na igwefoto bọtịnụ. N'ihi na ị na-ahụ gị aga na vidiyo ma ọ bụ foto, ị ga-nanị enweta na akara ngosi na ala akuku na n'aka ekpe nke gị na ihuenyo.
Nzọụkwụ 3. I nwekwara ike ile foto nke onwe gị na iji n'ihu igwefoto. Na-ebute igwefoto, enweta bọtịnụ na n'elu nri akuku ka ka ịgbanwee n'azụ na n'ihu igwefoto.
Nzọụkwụ 4. n'Ajọ ahịhịa akara ngosi maka ị ka ihichapụ a video ma ọ bụ a foto.
Nzọụkwụ 5. I nwekwara ike ịkọrọ gị foto site
Na-eleta gị foto gallery.
Scrolling site na gị photos.
Tapping Họrọ na igwefoto mpịakọta na họọrọ foto na ị chọrọ ịkọrọ.
> Resource> égwu> Top 5 igwefoto maka iPad égwu